Wasiir Hadliye: Dowladda Yemen waxaa looga baahan-yahay jawaab cad oo ku aadan dadka Soomaaliyeed ee la laa’yay | RBC Radio
Wasiir Hadliye: Dowladda Yemen waxaa looga baahan-yahay jawaab cad oo ku aadan dadka Soomaaliyeed ee la laa’yay
Posted on March 18, 2017 RBC, Wararka
Muqdisho (RBC Radio) Dowladda Soomaaliya ayaa ka dalbatay isbaheysiga uu hoggaamiyo Sacuudiga iyo dowladda Yemen inay jawaab cad ka bixiyaan qaxooti Soomaaliyeed oo lugu diley duqeyn ka dhacay xeebaha Yemen.
Ilaa 42 ruux dooni ay la socdeen ayaa duqeynta ku dhimatay ,dadka oo dhammantod ah Soomaali ah.Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya,Cabdisalaam Cumar Hadliye wuxuu sheegay dhimashada dadka inay ka dambeeyen isbahaysiga uu hoggaamiyo dalka Sacuudiga iyo Dowladda Yemen,sida ay baahisay wakaaladda wararka Soomaaliya ee SONNA.
“Waxaa ka dhacay Yemen dhibaato wayn oo gaartay dad Soomaaliyeed oo Masaakiin ah, waxaan ku tala jirnaa inaan kala hadalno Dowladda Yemen Arrintaan, sidoo kalana Yemen waxaa looga fadhiyaa inay Jawaab cad ka bixiso Arintaan.” sidaasi waxaa yiri wasiirka arrimaha dibadda.
Inta wuxuu ku darray wasiir Hadliye in dowladda Soomaaliya ay doonayso in la caddeeyso cida ka mas’uulka ah falkaan iyo sababta loo beegsaday dadka Soomaaliyeed.
Wasiirka arrimaha dibadda waxaa kalo uu xaqiijiyay inay duqeynta ku dhintay 42 ruux , sidoo kale wuxuu sheegay inay jiraan dad kale oo dhaawacmay kuwaas haatan lala tacaalayo xaaladooda caafimaad.